UTim Cook noWilliams ngeXESHA, ngoJuni 5 izimemo eziphambili, i -hlengware, kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
UTim Cook noWilliams ngeXESHA, ngoJuni 5 izimemo eziphambili, i -hlengware, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Sikwiveki ephambili yeApple ngaphandle kwento yokuba le veki yesibini kaMeyi isishiyile ukungabikho kweenguqulelo ze-beta zeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza IMacOS, i-iOS, i-tvOS kunye neewotsOS, ezivela kwinkampani yeCupertino. Le veki "ibiphumle" ngale ndlela kwaye uApple ushiya ezi nguqulelo ze-beta kule veki izayo. Nokuba kunjalo, iindaba malunga nophawu lwentengiso azimanga kwaye phakathi kwabo sifumana umdla onomdla wokuba sizokushwankathela kule Cawa yesibini yenyanga kaMeyi.
Siza kuqala ngumahluko kwi IXESHA lemagazini kaTim Cook noJeff Williams. Kule mahluko kudityaniswa nabaphathi be-Apple kwifayile ye- uluhlu lwabantu abangama-20 abanempembelelo kwitekhnoloji kwaye le yinto ihlala ilungile.
Ezesibini zeendaba eziqaqanjisiweyo kule veki yinto esele sinayo engqondweni ukuba izakwenzeka kodwa iqinisekiswe ngokusesikweni. I-Apple ithunyelwe kule veki izimemo zokwenza intetho ephambili ngomhla woku-5 kweyeSilimela en iWWDC yalo nyaka.
Okwesithathu kwezi zinto zibalaseleyo evekini kubhekisa kwirekhodi elitsha lenkampani. I-Apple sele idlulile Imali eyibhiliyoni yeedola eyi-800.000 okokuqala kwimbali yayo kwaye oku into enomdla ngokwenene kwinkampani ngokwayo engayeki ukukhula.
Ezona ndaba zakutshanje zale veki zimalunga intlawulelo echaphazele iTelefonica kunye nezinye iinkampani kunye namashishini kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ezi ndaba aziveli ngqo kwi-Apple kodwa ugxa wethu uPedro ubonakalisa iinkcukacha ezinomdla ngendlela Wanna Decryptorhlengware isebenza Ayichaphazeli iiMacs kodwa ichaphazele izigidi zeePC zeWindows.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » UTim Cook noWilliams ngeXESHA, ngoJuni 5 izimemo eziphambili, i -hlengware, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ukuthengisa kwi-Mac mini, kunokwenzeka ukuba uvuselele izixhobo?
Injineli yeApple inoxanduva lweNight Shift kunye neSueño ishiya inkampani